192.168.1.1 Admin Banye
192.168.1.1 nbanye Info
Best 192.168.1.1 Nbanye Guide nzọụkwụ site nzọụkwụ
Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme n'azụ 192.168.1.1?
Na mbụ e nwere 5 klas nke internet adreesị A, B, na C, which were general use D which was reversed for multicast addressing and E as reserved for experimental use. This class system was used when allocating out IP addresses to a company.
Class A, B, na C-agwa
Although write out IPv4 addresses in decimal the definitions of A, B, na C na-agwa n'ezie tụlere otú ihe address na-egosi na ọnụọgụ abụọ. na nke a, adreesị na-anọchi anya 4 iche iche nke 8 ibe n'ibe. Ọzọkwa, note that IP Addresses are actually split into 2 akụkụ. A part presenting the network and a part representing the host.
On a typical IP Address ka eji na a netwọk.
Na ọnụọgụ abụọ na bụ.
Network akụkụ | Nọrọ Part
192.168.1.bụ netwọk nke adreesị na ndị ikpeazụ 1 is the host part.
Gịnị bụ 192.168.1.1 IP Address?
192.168.1.1 IP adreesị bụ ndabara ọnụ ụzọ ámá nke kasị wireless routers ka TP-Link, Cisco, Linksys, D-Link, Belkin, Asus, Netgear, and Billion Router or ADSL modems. There are several IP main addresses a router can take, 192.168.1.1 is the most common one though 10.0.0.1 ma ọ bụ 192.168.0.1nwekwara ndị ọzọ nhọrọ. These are commonly known as host addresses.
Concretely otu onye nwere ike jikwaa Security Nhọrọ, Network Management, WAN (Wide Area Network), ADSL (Akpàràkpà Digital ụtụ magazin Line), IP QoS, DNS (Ngalaba Aha System), WLAN (Ikuku Obodo Area Network) ntọala, DSL (Digital ụtụ magazin Line), n'akwụkwọ nnọchiteanya, LAN (obodo ebe netwọk), Mac (Ọkara Access Control), WPS ngọngọ n'etiti ndị ọzọ.
Olee otú nbanye 192.168.1.1 IP Address nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu
ntụpụ ụkwụ 1. Na mbụ, ị nwere ike tinye https://192.168.1.1 into your browser’s address bar.
ntụpụ ụkwụ 2. Mgbe ahụ Ọ bụrụ na ị na-echefu ihe njehie, then Https://192.168.1.1 is not your router’s IP address.
So my friends you can check below Ndabere rawụta IP Address List:
ntụpụ ụkwụ 3. Then after Enter your default roter username and password to login to your router.
ntụpụ ụkwụ 4. If you forgot your username and password you can follow the below provided instructions to recover them.
If you did not change the default username and password that comes with the router then you can please check your Ndabere rawụta Aha ojii ma Paswọdu List:
3na http://192.168.1.1 admin admin
Digicom http://192.168.1.254 ọrụ paswọọdụ
Netgear http://192.168.0.1 admin paswọọdụ
Thomson http://192.168.1.254 ọrụ ọrụ
ntụpụ ụkwụ 5. Once you are in the router’s admin panel then you will be able to change and modify all internet settings.
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ị chefuru gị rawụta na aha njirimara na paswọọdụ
hey okorobịa!! Ọ bụrụ na ị na-ama gbanwere na-echefu gị rawụta na aha njirimara ma ọ bụ paswọọdụ, then you can simply reset the router alternatively. Site resetting ya ya factory nrụpụta ntọala, ndabara aha njirimara na paswọọdụ ga-weghachiri eweghachi. The nrụpụta button na kasị routers bụ nnọọ obere ma ike siri chọta. Ị ga mkpa a pensụl nib, pin, ma ọ bụ ndị ọzọ mkpa ihe na pịa ya ala maka gburugburu 15 sekọnd.
Esi nweta Cisco rawụta eji 192.168.1.1
➥ Mbụ niile i nwere ike jikọọ gị Cisco rawụta gị na kọmputa site na iji RJ45 cable.
➥ Mgbe ahụ, mgbe Turn na Cisco rawụta na Computer.
➥ Next Open Browser na pịnye https://192.168.1.1 na pịa Tinye.
➥ Ugbu a tinye-kpọ aha njirimara na paswọọdụ (admin admin) ma ọ bụrụ na ị na-adịghị agbanwe agbanwe. Ma ọ bụ Tinye aha njirimara na paswọọdụ.
➥ Ọ ga-emeghe Cisco rawụta Admin Page.
TP-njikọ rawụta nbanye
➥ TP-njikọ rawụta nwere IP address 192.168.1.1.
➥ Ị nwere ike ijikọ gị TP-Link rawụta na Computer na RJ45 cable.
➥ Next Type https://192.168.1.1 in browser and Press Enter.
➥ Tinye aha njirimara na paswọọdụ.
IP adreesị: 192.168.1.1 (ma ọ bụ http://tplinkwifi.net)
Password: admin / paswọọdụ
➥ Now go to ikuku Setting and change settings that you need.
D-Link rawụta nbanye
➥ Mbụ niile jikọọ D-Link rawụta gị na kọmputa na Ethernet cable.
➥ Mgbe ahụ Tụgharịa na kọmputa gị.
➥ Ugbu a Open Web nchọgharị. ụdị http://192.168.1.1 ma ọ bụ http://dlink rawụta na pịa Tinye.
➥ Abanye na D-Link rawụta onye nchịkwa na aha njirimara na paswọọdụ.
➥ Ọ bụrụ na ị banye na oge mbụ mgbe ahụ ị nwere ike pịa na Mbido wee gaa wireless ntọala.
➥ Mgbe ahụ ị nwere ike Mbido ya aka ma ọ bụ na-akpaghị aka.
OTÚ abanye na A NETGEAR rawụta
➥ Na mbụ, i nwere ike jikọọ Netgear rawụta gị Windows kọmputa
➥ Mgbe ahụ oghe Browser na ụdị https://192.168.1.1 na Press Tinye.
➥ Ugbu a Tinye Netgear rawụta si ndabere na aha njirimara na paswọọdụ.
➥ Ụmụ okorobịa Ọ bụrụ na ị na-amaghị ndabere aha njirimara-paswọọdụ wee chọpụta anyị n'elu table.
➥ Gaa Ikuku Settings ma hazie ntọala.
Echere m na ọ ga-ezu ozi banyere 192.168.1.1 IP Address Default rawụta Aha ojii & Password. M olileanya na niile iche iche nke ozi bara uru ka ị ma ọ bụrụ na ị chere ihu nsogbu ọ bụla banyere nke a post, mgbe biko ikwu anyị na anyị ga na-agbalị iji dozie nsogbu gị dị ka anya dị ka o kwere. Daalụ maka na ịga anyị na saịtị.
192.168.1.254 Admin Banye
Linksys rawụta Banye & Linksys rawụta nhazi Guide
Netgear rawụta Banye
TP-Link rawụta Banye
Chọta rawụta IP Address
Rawụta IP Address
WordPress Okwu: Wellington site ThemeZee.